Manchester United oo dooneysa in mustaqbalka Paul Pogba la xaliyo ka hor Kirismaska | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Manchester United oo dooneysa in mustaqbalka Paul Pogba la xaliyo ka hor...
Manchester United oo dooneysa in mustaqbalka Paul Pogba la xaliyo ka hor Kirismaska
Manchester United ayaa la sheegay inay dooneysoin mustaqbalka Paul Pogba in la xaliyo marka xiliga Christmas -ka.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee ku guuleystay Koobka Adduunka ayaan weli mustaqbalkiisa u hibeyn kooxda wixii ka dambeeya 2022, iyadoo Red Devils ay halis ugu jirto inay ku weyso beeca xorta ah dhammaadka ololaha hadda.
Waxaa la fahansan yahay inay sii kordhayso rajada laga qabo in kooxdu ay heshiis cusub ka saxiixato Pogba, inkasta oo Real Madrid iyo Paris Saint-Germain ay weli la xiriirinayo.
Sida laga soo xigtay The Sun , Red Devils ayaa dooneysa in mustaqbalka Pogba la xalliyo ka hor sannadka cusub, haddii uu go’aansado inuu sii joogo ama mustaqbalkiisa ciyaareed meel kale ku hagaajiyo marka uu dhammaado qandaraaskiisu.
Warbixinta ayaa intaa ku dartay in xiddigii hore ee Juventus uu mushaar ahaan u qaadan doono 400 kun oo ginni isbuucii heshiis cusub oo Old Trafford ah, halka Real Madrid aysan u badneyn inay heshiisyo la gasho Pogba iyo Kylian Mbappe .
Pogba ayaa durba ku faanay 7 caawin oo uu sameeyay intii uu ciyaaray 2021-22 xili ciyaareedka Premier League, laakiin ma uusan awoodin inuu ka hortago in kooxdiisu ay barbaro 1-1 ah la gasho Everton Sabtidii.
Previous articleBruno Fernandes oo jabiyay rikoork Premier Leagueb ah kadib Caawintiisa Kulanka Everton
Next articleSh. Shaakir oo iclaamiyey dagaal horleh – Maxaa soo kordhay?